ဖန်ဆင်းရှင်ရှိနိုင်မည်လား? December 10, 2009
Filed under: ရခဲမွန်မြတ်လူ့ဘ၀ — amayaphay @ 8:50 am
ဖန်ဆင်းရှင်ဘုရားဟူသည် ရှိပါမည်လား၊ ‘အရာအားလုံးသည် သဘာဝ တရားကြောင့် ဖြစ်တည်နေခြင်းမဟုတ်ပေဘူးလား?
အလွန်ရှုပ်ထွေးလှသော်လည်း စနစ်ကျလှသည့် စကြာဝဠာကြီး၏ စနစ်တစ်ခု တွင်ဖန်ဆင်းထိန်းချုပ်သူမရှိလျှင် ဖြစ်နိုင်ပါမည်လား။ ၄င်း၏ နောက်ကွယ်တွင် စကြာဝဠာထက် ကြီးမြတ်သော မဟာတန်ခိုးကြီးပုဂ္ဂိုလ် တစ်ပါးပါး ရှိကိုရှိရပါမည်။
ဥပမာ ။ ပြခန်းတစ်ခုအတွင်း ဂြိုလ်ကြီးကိုးလုံး တစ်လုံးနှင့်တစ်လုံး တိုက်ခိုက်ခြင်းလည်း မရှိ ချိတ်ဆွဲ ထားခြင်းလည်းမရှိပါဘဲ သူ့လမ်းကြောင်းနှင့်သူ အချိန်မှန် စနစ်တကျ လှည့်ပတ်နေတာကိုကြည့်ပြီး ဒါဟာ ဘယ်သူမှ လုပ်ထားတာမဟုတ်ဘူး။ ဒီပြခန်းထဲကို လည်းသူ့ဖာသာသူရောက်လာတာ။ ‘ဒါဟာ အလွန်အံ့ဩဖွယ်ကောင်းတဲ့ သဘာဝ တရားတွေပေါ့ဟု ဆိုပါက သင် လက်ခံနိုင်ပါမည်လား။ နာရီတစ်လုံး၏ စက်အစိတ် အပိုင်းများကို တစ်စစီဖြုတ်ပြီး ချထားပါက သူ့ဖာသာသူ အချိန်မှန်လည်ပတ်နေသော နာရီ တစ်လုံး ဖြစ်လာမည် မဟုတ်ပါ။ ၄င်းတွင် တီထွင်သူ၊ ပြုပြင်ထိန်းချုပ်သူ ရှိရမည် ဖြစ်ပါသည်။ ထာဝရဘုရား၏ သမ္မာကျမ်းစာတော်မြတ်ထဲတွင် ဖန်ဆင်းခြင်းနှင့် ကင်းလွတ်လျက် ဖြစ်သောအရာ တစ်စုံတစ်ခုမျှမရှိ ဟုဆိုထားပါသည်။
( ယော ၁း၁-၃၊ ဆာ ၁၉း၁၊ ရောမ ၁း၂၀)